Maonero Emaimeri uye Zvinhu Zvakabviswa neMistake. Usabvisa Maemail Emaonero.
musha Products DataNumen Outlook Repair Outlook maemail uye zvimwe zvinhu zvinodzimwa nekukanganisa.
Delete Outlook Zvinhu neMistake? DataNumen Outlook Repair Unogona Kuvasunungura!
Delete Maemail Eemail uye Zvinhu neMistake:
Paunodzima email kana chimwe chinhu muAptlook, nekudzvanya bhatani re "Del", zvobva zvaendeswa ku "Zvinhu Zvakadzimwa”Forodha. Unogona kuidzorera nekungoenda ku "Zvinhu Zvakadzimwa”Dhairekitori, uchitsvaga email yaunoda, wozoidzosera panzvimbo yayo yepakutanga kana mamwe maforodha.
Nekudaro, kana iwe ukabvisa chinhu ne "Ctrl-Del", kana iwe ukabvisa chinhu kubva ku "Zvinhu Zvakadzimwa”Dhairekitori, ipapo chinhu chacho chinobviswa muAptlook zvachose. Nzira chete yekuitora ndeye kushandisa chigadzirwa DataNumen Outlook Repair, iyo inogona kugadzirisa dambudziko semhepo, seinotevera:
Sarudza iyo Outlook PST faira uko zvimwe zvinhu zvinodzimwa zvachose seinobva PST faira kuti igadziriswe.
Gadzirisa sosi reOptlook PST faira. DataNumen Outlook Repair ichaongorora uye kusabvisa zvinhu zvakabviswa.
Mushure mekugadzirisa maitiro, unogona kushandisa Outlook kuvhura yakatarwa PST faira uye uwane zvese zvakabviswa zvinhu zvadzorerwa kunzvimbo dzavanobviswa zvachose. Semuenzaniso, kana iwe ukashandisa "Ctrl-Del" bhatani kudzima zvachose email kubva ku "Inbox”Dhairekita, ipapo DataNumen Outlook Repair ichaidzorera ku "Inbox”Faira mushure mekudzoreredza. Kana iwe ukashandisa "Del" bhatani kudzima iyi email kubva "Inbox"Folda, wobva wabvisa zvachose kubva pa"Zvinhu Zvakadzimwa"Folda, uye mushure mekudzoreredza, ichadzoreredzwa ku"Zvinhu Zvakadzimwa”Folda.
Kana iwe usingakwanise kuwana zvinhu munzvimbo dzadzakabviswa zvachose, ipapo unogona kuedza kuzviwana nenzira dzinotevera:
1.1 Tsvaga ivo mu "Kudzorerwa_Groupxxx" maforodha. Zvinhu zvakabviswa zvinogona kurapwa se lost & zvinhu zvakawanikwa, izvo zvinodzorerwa zvoiswa mumafolda anonzi "Kuwanikwazve_Groupxxx" mune yakatarwa PST faira.
1.2 Kana iwe uchiziva zvimwe zvinhu zvezvinhu zvaidiwa, semuenzaniso, nyaya yeemail, mamwe mazwi akakosha mumuviri weemail, nezvimwe, ipapo unogona kutora zvivakwa izvi sekutsvaga kwekutsvagisa, uye shandisa iyo Outlook yekutsvaga basa kutsvaga iyo yaida zvinhu mune yese yakagadziriswa PST faira. Dzimwe nguva, zvinhu zvakabviswa zvinogona kupora zvoiswa mune mamwe maforodha kana maforodha ane arbitrarmazita. Nebasa rekutsvaga reAptlook, unogona kuzviwana zviri nyore.
Unogona kucherechedza zvakapetwa zvisina kubvisirwa zvinhu mu "Zvadzorerwa_Groupxxx" maforodha. Ndokumbirawo ungovaregeredza. Nekuti kana Outlook ikabvisa chinhu, ichaita mamwe makopi zvachose. DataNumen Outlook Repair ine simba zvekuti inogona kudzoreredza makopi akaisirwa uye nekuibata se lost & zvinhu zvakawanikwa, izvo zvinodzorerwa zvoiswa mumafolda anonzi "Kuwanikwazve_Groupxxx" mune yakatarwa PST faira.
Semuenzaniso PST faira uko email ine musoro unoti "Kugamuchirwa kuMicrosoft Office Outlook 2003" inobviswa zvachose. Outlook_del.pst
Iyo faira yakadzorerwa ne DataNumen Outlook Repair, umo email yakabviswa inodzoreredzwa panzvimbo yayo yekutanga "Inbox"Folda: Outlook_del_fixed.pst